सबैभन्दा बढी मुक्तिनाथ विकास बैंकको खूद नाफा १ अर्बभन्दा बढी
२०७८ बैशाख, १०
वैशाख १०, काठमाडौं । हालसम्ममा पाँच ओटा विकास बैंकले चालू आवको तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेका छन् ।
मुक्तिनाथ विकास, गरिमा विकास बैंक,महालक्ष्मी विकास बैंक,ज्योति विकास बैंक र कामना सेवा विकास बैंकले वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेका हुन् ।
वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेका पाँच ओटै बैंकको वित्तीय अवस्थामा उक्त अवधिसम्ममा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । पाँच ओटा बैंकमध्ये सबैभन्दा बढी मुक्तिनाथ विकास बैंकले खुद नाफा आर्जन गरेको छ ।
उक्त कम्पनीले चालू आवको तेस्रो त्रैमाससम्ममा रू. १ अर्ब ४६ लाख खुद नाफा कमाएको छ । कम्पनीले गत आवको तेस्रो त्रैमासमा रू. ६७ करोड ३० लाख नाफा कमाएको थियो । नाफा गत आवको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा ४८ दशमलव ७५ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।
वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेका ती कम्पनीमध्ये खुद नाफा गत आवको तेस्रो त्रैमासको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा कामना सेवा विकास बैंकको १७२ दशमलव शून्य १ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । गत आवको तेस्रो त्रैमासमा रू. २१ करोड ५४ लाख खूद नाफा आर्जन गरेको उक्त कम्पनीको खूद नाफा चालू आवको सोही अवधिमा वृद्धि भएर रू. ५८ करोड ६१ लाख पुगेको छ ।
पाँच ओटै बैंकको खूद ब्याज आम्दानी र सञ्चालन नाफामा वृद्धि भएकाले खूद नाफामा वृद्धि भएको हो । त्यसैगरी प्रतिशेयर आम्दानीको आधारमा सबैभन्दा बढी कामना सेवा विकास बैंकनै अगाडि रहेको छ । कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रू. २९ दशमलव ४७ रहेको छ ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा सबैभन्दा बढी अर्थात् रू. ८२ करोड ८७ लाखभन्दा बढी रहेको छ । एनएआरएस प्रणली अनुसार कम्पनी आर्जन गरेको खुद नाफाबाट विभिन्न शिर्षकमा छुट्याएपछिको नाफा नै वितरणयोग्य नाफा हो ।
महालक्ष्मी विकास बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी रू. १६ दशमलव १ रहेको छ । पाँच ओटा बैंकमध्ये सबैभन्दा बढी लाभांश क्षमता मुक्तिनाथ विकास बैंकको १७ दशमलव २२ प्रतिशत रहेको छ ।
गरिमा विकास बैंकको लाभांश क्षमता १३ दशमलव ३३ प्रतिशत, ज्योति विकास बैंकको ११ दशमलव २६ प्रतिशत,कामना सेवा विकास बैंकको १४ दशमलव ६६ प्रतिशत र महालक्ष्मी विकास बैंकको लाभांश क्षमता ७ दशमलव ७० प्रतिशत रहेको छ ।